Siyaasi Xasan Muudeey: Xukuumaddu wey hareer martay qaanuunka iyo madax bannanida dalka u yaalla – Hornafrik Media Network
Siyaasi Xasan Muudeey: Xukuumaddu wey hareer martay qaanuunka iyo madax bannanida dalka u yaalla
By HornAfrik	 On Sep 6, 2017
Go’aankii sida ka kafiirsasha la’aanta ahaa ay soo saareen xukuumadda waa mid sharci darro ah waana mid aanan loo cuksan shuruucda dalka u yaalla ugubna ku’ah dalka iyo qarannimada Soomaaliyeed.
Sida aan ognahay dalkeena waxa uu leeyahay Maxkamad loomana soo gudbin dacwad ka dhan ah Cabdikariim Qabli-Dhagax iyo Jabhadda ONLF in ay Argagixisada Alshabaab ay xiriir leeyihiin mana xukumin in Jabhadda ONLF ay kamid yihiin kooxaha argagixisada ee dhbibaatada ku’ah amniga iyo qaranimadda dalka.
“Qodobada dastuuriga ah ay baal martay Xukuumadda”
1~Qodobka 36aad oo Dastuurka Kumeel Gaarka ah ee Soomaaliya wuxuu qabaa in qofka eedaysanaha ah la gacangelin karo oo keli ah marka la maro sida sharciga dalku qabo iyo qawaaniinta caalamiga ah.
2~Isucelinta eedeysanaha iyo danbiilaha waa in ay ahaataa mid waafaqsan dhaqanka iyo qaanuunka caalamiga ah ‘waana in baaralamaanka federaalka soo saaraa sifada loo marayo meel marinta iyo isu celinta sida loo maamulayo eedaysanaha .
Waa wax laga xumaado lana aqbali karayn in go’aamada noocaan ah ay soo saaraan xukuumadda hadda jirta waxayna tusaalaynaysaa in xukuumaddu aysan xeerin shuruucda dalka uu leeyahay.
Waxaan baaq udirayaa Baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed in ay arinta go’aanka xukuumadda ay ka hor yimaadaan badbaadana unoqdaan ilaalinta shuruucda iyo madax bannaanida qaranimada dalka uu leeyahay.
*Soomaaliya Soomaali baa leh *
Mahadsanidiin Hassan Abdikadir Mudey.
Alshabaab oo iska fogeeyay in Qalbidhagax ay xiriir lahaayeen.
Sarkaal ka tirsan NISA oo ku tilmaamay waxaan suurtagal ahayn in ONLF lala xiriiriyo Alshabaab.